Shir gaar ah ayaa magaalada New York waxaa kulan ku yeeshay Madaxweynaha sooaaliya iyo Ra’iisul Wasaaraha dalka Belgium-ka. Shir-doceedka ay ku yeesheen magaalada New York Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaaraha Belgium Mudane Charles Michel waxaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labada dal, kaalinta Belgium ee dib u dhiska Soomaaliya iyo sidii Midowga Yurub u sii dardargelin lahaa taageerada uu ku bixiyo dowlad-dhisidda Soomaaliya. Dalka Belgium-ka ayaa waxaa uu kamid yahay dalalka Yurub oo kuwaas oo daneeya arrimaha Soomaaliya. – Hornafrik Media Network
Shir gaar ah ayaa magaalada New York waxaa kulan ku yeeshay Madaxweynaha sooaaliya iyo Ra’iisul Wasaaraha dalka Belgium-ka. Shir-doceedka ay ku yeesheen magaalada New York Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaaraha Belgium Mudane Charles Michel waxaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labada dal, kaalinta Belgium ee dib u dhiska Soomaaliya iyo sidii Midowga Yurub u sii dardargelin lahaa taageerada uu ku bixiyo dowlad-dhisidda Soomaaliya. Dalka Belgium-ka ayaa waxaa uu kamid yahay dalalka Yurub oo kuwaas oo daneeya arrimaha Soomaaliya.
By Liibaan Nuur	 On Sep 25, 2019
Madaxwaynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa intii lagu guda jiray Shirka 74-aad ee Qaramada Midoobay, waxaa uu wada hadal kula yeeshay magaalada New York Madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga Mudane Rajab Dayib Erdogan.
Labada Madaxwayne ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee Soomaaliya iyo Turkiga iyo sidii loo sii dardargalin lahaa iskaashiga saaxiibtinimo eek a dhaxeeya labada dal.
Sidooo kale Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo wuxuu magaalada New York kula kulmay Madax ka socota dalaka Caalamka, kuwaas oo ka qayb galay shirka Qamada Midoobay.
Farmaajo iyo Charles Michel oo kulan ku yeeshay New York
Wafdi ka socda dowladda oo Doxa kula kulmay Madaxda Qatar.